संसदलाई गृहमन्त्रीको जवाफ : डा. केसीको शैली अधिनायकवादी « Tulsipur Khabar
संसदलाई गृहमन्त्रीको जवाफ : डा. केसीको शैली अधिनायकवादी
काठमाडौं,२० असार ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अनसनका भरमा स्वास्थ्य नीति बनाउन खोज्नु अधिनायकवादी शैली भएको बताएका छन् । बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री बादलले डा. गोविन्द केसीलाई गिरफ्तार नगरिएको र विरोध गर्न रोक नलगाएको बताए । तर, लोकतन्त्रका नाममा जहाँ पनि विरोध प्रदर्शन गर्न र अनसन बस्न नपाइने बताए । उनले भने, ‘विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छैन । अनसन बस्न पाइन्छ ।’
गंगामायाको विषय राजनीतिक ढंगले हल हुन्छ
गृहमन्त्री थापाले छोराको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेकी गंगामायाको अनशन देशलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने खेल त होइन भनी प्रश्न गरे ।
यस्ता विषयलाई राजनीतिक ढंगबाट हल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहमत भइसकेको पनि बताए । ‘यो त निर्णय भइसकेको छ । यसलाई राजनीतिक ढंगले हल गर्नुपर्छ । यहाँ एउटा होइन १५/१७ हजार गंगामाया छन् । समस्या हल गर्दा १५/२० हजार गंगामायाको आशुलाई सम्भिmन जरुरी छ । त्यसलाई विशेष तरिकाले, लोकतान्त्रिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
गंगामायाको विषयलाई अतिरञ्जित गरेर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न खोजिएको पनि उनले आरोप लगाए ।